Maalinta: 29-ka July, 2019
Maalgashiga KARDEMİR wuxuu kusii socdaa sidii loo qorsheeyay
Warshadaha Birta iyo Birta ee Karabük (KARDEMİR) waxay kordhin doontaa awoodda afar maalgashi ee howlaha goluhu uu socdo. 4 bishii Juun. Shirkadda waxay dib u cusbooneysiisay foornada qiiqa dabka iyo 2 Converter, Lime [More ...]
Bora Yalınay Waxaa loo magacaabay Doğan Holding CFO
Bora Yalınay waxaa loo magacaabay CFO of Doğan Holding, oo ka shaqeysa tamarta, tafaariiqda shidaalka, maalgashiga, madadaalada internet-ka, warshadaha, gawaarida, dalxiiska, ganacsiga iyo guryaha. Yalınay, 29 CFO iyo Maaliyad ahaan Julaay 2019 [More ...]
Dhacdo cabsi leh oo ka dhacday Xarunta tareenka Frankfurt!
Saldhigga tareenka Frankfurt ee Jarmalka, wiil da 'yar ah oo ah 40 ayaa riixay wiilkiisii ​​8-sano jir iyo hooyadiis hortiisa tareenka xawaaraha sare ku socda. Intii hooyadeed loo qaaday cisbitaalka iyada oo dhaawacyo ka soo gaadheen, ilmuhu wuu naf waayey. Xarunta Dhexe ee Frankfurt [More ...]
Jid-galyada cusub ee Caasimadda waxay yareyn doontaa Gaadiidka
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso marinka isgoyska iyo isgoyska loogu talagalay gaadiid aamin ah oo raaxo leh caasimada iyadoon hoos u dhicin. Kulankii Golaha Dawlada Hoose ee Bishii Luulyo, si loo yareeyo taraafikada meelaha muhiimka ah ee caasimada. [More ...]
Turkey waxa uu wadaa shir duulista ee Istanbul Airport choline waa mid ka mid ah ganacsatada, kuwaas oo iGain Construction, oo toobad keen badan ah foodhyaan oo Cengiz Shirkadda Dhismaha ee Galleon. Wareejinta ayaa waxaa ansixiyay Gudiga Tartanka. Gegada Diyaaradaha ee Istanbul sanadkii 25 [More ...]
Degmada Samsun ee Magaalo-weynta SAMULAŞ, oo ka shaqeysa xargaha West Park, xadhkaha, rogayaasha xamuulka qaada, gondolas iyo dhammaan nidaamka farsamada elektiroonigga ilaa 'Dayactirka culus'. Xargaha, oo hawlahooda aan gebi ahaanba la joojin, waa 13.00 oo leh 23.00. [More ...]
Wadada Wadnaha ee Wadada Wadnaha ee Sincan OSB Ayaa Lagu Furay Gaadiidka
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa ku kordhisay mid cusub dhismaheeda wadooyinka iyo howlaha laami ah ee laga wado dhamaan caasimada. Meelo badan oo magaalada ah, wadooyin cusub, isgoysyo iyo marinno hoosaadyo ayaa dardar gelinaya dhismaha Magaaladda [More ...]
Wadada iyo Wadada dhinaceeda ayaa ka shaqeeya Dilovası
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay xaqiijinaysaa mashruuc kale oo muhiim ah Dilovası. Isgoyska 'Is-goyska - Isgoyska Yavuz Sultan Selim Street' mashruuca waxaa laga hirgaliyay magaalo weyn, irridda iyo bixida gobolka [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso muwaadiniinta sidii ay u sameyn lahaayeen safar raaxo leh, nabad ah oo nabdoon. Xaaladda guud, ogeysiinta la sameeyay inta lagu jiro maalinta Kocaeli Magaalo-Weyne ee Gaadiidka iyo Kormeerka Maareynta Gaadiidka [More ...]
Abdülmecid Akkaş, oo ah madaxa dayactirka gawaarida iyo bakhaarka xarunta Uşak Train Station, wuxuu saxeexay sheeko guul ah oo weyn, wuxuuna u aqriyay jaamacad furan wuxuuna qoray buugaag jiilalka mustaqbalka. Qoraa Mashiinka ah Tusaalaha Jiilka mustaqbalka [More ...]
Jidka weyn ee Istanbul İzmir - Qeybta 192 Kiiloomitir ayaa furan
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan ayaa booqday dhismaha qaybta Balıkesir ee Wadada İzmir. [More ...]
Degmada Çorlu ee Tekirdağ, 25 dadka waxay ku dhinteen maqalka labaad ee shilka tareenka, 10 Sebtember Corlu Public Center Center Hall ayaa lagu qaban doonaa. Istaanbuul ayaa ka socota degmada Uzunköprü ee Edirne Halkalı8 bishii Luulyo 2018 [More ...]